जापान मा यात्रा गर्नु भन्दा पहिले जान्नको लागि जानकारीको 11 आधारभूत टुक्रा - Best of Japan
सबै भन्दा पहिले, म जापान मा यात्रा को लागी केहि आधारभूत परिचय गर्न चाहान्छु। निम्न पृष्ठहरूमा संक्षिप्त जानकारी समावेश छ जुन तपाईं आफ्नो यात्रा अघि जान्न चाहानुहुन्छ। यसमा जापानी समय क्षेत्र, पैसा, मौसम, प्राकृतिक प्रकोप, वार्षिक घटनाहरू, सिम कार्डहरू र जापानी भाषा सम्बन्धी जानकारी समावेश छ। थपको रूपमा, यी विषयहरूलाई थप विस्तृत रूपमा सम्बोधन गर्न मैले पूरक वेबसाइटहरू तयार गरेको छु। यदि तपाईंसँग समय छ भने, यिनीहरू पनि पढ्नुहोस्।
के तपाईलाई जापानी भाषा, मुद्रा इत्यादि बारे थाहा छ?
जापान मा सबै भन्दा राम्रो मौसम कहिले हो?
जापान यात्रा को लागी वर्ष को सबै भन्दा राम्रो समय कहिले हो? उत्तर तपाईंको यात्राको लागि उद्देश्यमा निर्भर गर्दछ। सायद तपाई जापानको प्रसिद्ध चेरी फूलहरू हेर्न चाहानुहुन्छ? यदि त्यसो हो भने, म अप्रिल को महीनामा जापान आउन सिफारिस गर्दछु। हुनसक्छ तपाईं सुन्दर हिउँ परेको दृश्यहरू हेर्न चाहानुहुन्छ? प्रयास गर्नुहोस् ...
जापानी भाषा अवरोध पार गर्न गोप्य रणनीति के हो?
धेरै जापानी मानिसहरु अ using्ग्रेजी प्रयोग गर्न राम्रो छैन। यस कारणले, जापान आउने मानिस जापानी मानिसहरुसंग राम्रो कुराकानी गर्न सक्दैनन्। विदेशीहरू कहिलेकाँही सोच्दछन् कि कसरी हराउँदछ वा जानकारीको आवश्यक पर्दा कसैलाई कसरी सोध्ने। जब तिनीहरू सानो शहर वा गाउँ जान्छन् तिनीहरू सजिलैसँग ...
जापानी मुद्रा कसरी प्रयोग र आदानप्रदान गर्ने
जापान मा मुद्रा येन हो। यस पृष्ठसँग पछिल्लो विनिमय दरहरू छन् त्यसैले कृपया मुद्रा विनिमय गर्नु अघि यहाँ सन्दर्भ गर्नुहोस्। यहाँ तपाइँ जापानी बिल र सिक्का को बारे मा जानकारी पनि पाउनुहुनेछ। थप रूपमा, म जापानमा क्रेडिट कार्डको प्रयोगको सम्बन्धमा हालको स्थिति बुझाउनेछु। को तालिका
जापानमा सिम कार्ड वा पकेट वाइफाइ कसरी प्रयोग गर्ने
जापान मा आफ्नो बसाई को समयमा, तपाईं एक स्मार्टफोन को उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं कसरी प्राप्त गर्नुहुन्छ? छ वटा सम्भावित छनौटहरू छन्। पहिले, तपाइँ तपाइँको वर्तमान योजना मा रोमि service सेवा को उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ तर दरहरु को लागी तपाइँको सेवा प्रदायक संग जाँच गर्नुहोस्। दोस्रो, तपाईं आफ्नो हालको स्मार्टफोनको साथ निःशुल्क वाइफाइ प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
जापानमा अहिले कति बज्यो?
जापानमा केवल एक समय क्षेत्र छ। टोकियो, ओसाका, क्योटो, होक्काइडो, सेन्दै, नागानो, हिरोशिमा, फुकुओका, कुमामोटो र ओकिनावा सबै एकै समयमा छन्। यसबाहेक, जापानमा डेलाइट बचत समय छैन, त्यसैले तपाईंलाई जापानको समय थाहा छैन। जापान अब तल छ ...
के तपाईंलाई जापानी सम्राट र राष्ट्रिय झण्डाको बारे थाहा छ?
जब तपाईं जापान मा यात्रा गर्नुहुन्छ तपाईं गहिरो रमाईलो महसुस गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईंलाई जापानी इतिहासको आधारभूत ज्ञान छ भने। यस पृष्ठले जापानी इतिहासमा महत्वपूर्ण सम्राटहरूको संक्षिप्त सारांश समावेश गर्दछ। थप रूपमा, म जापानको राष्ट्रिय झण्डा को बारे मा जानकारी समावेश गर्छु। जापानजापानी फ्ल्यागका सामग्री सामग्री तालिका
जापानको बिदाको बारेमा जानौं
जापानमा १ stat वैधानिक बिदा छन्। यदि छुट्टी आइतवारमा आउँदछ भने, पछिल्लो हप्ताको दिन (सामान्यतया सोमबार) त्यस पछि छुट्टी हुनेछ। जापानी छुट्टीहरू अप्रिल महिनाको अन्त्यदेखि मेको सुरूवातमा हप्तामा केन्द्रित हुन्छन्। यस हप्तालाई "गोल्डन वीक" भनिन्छ। थप रूपमा, त्यहाँ ...
जापानमा वार्षिक घटनाहरू जान्न रमाईलो छ!
जापानमा अझै धेरै परम्परागत वार्षिक घटनाहरू छन्। धेरै जापानी मानिसहरु आफ्नो परिवार संग यी वार्षिक घटनाहरु मनाउन छनौट गर्दछन्। भर्खर धेरै विदेशी पर्यटकहरूले त्यस्ता घटनाहरूको आनन्द उठाए। यी मध्ये एक घटना मार्फत तपाईं जापानी संस्कृतिको राम्रो विचार प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यस लेखले यी वार्षिक घटनाहरूको विवरण दिन्छ। को तालिका
जापानमा मौसम र मौसम मौसम अनुसार फरक हुन्छ
जब तपाइँ जापान भ्रमण गर्ने योजना गर्नुहुन्छ, मौसम र मौसम कस्तो रहनेछ? यस लेखमा म जापानको मौसम र मौसम र प्रत्येक क्षेत्रका सुविधाहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सामग्रीको तालिका जापानको मौसम विवाटर मौसममा छ: जापानमा समुद्री किनारा जापानमा वर्षा Seतु: हिउँ
प्राकृतिक प्रकोपहरू जस्तै भूकम्पको बारेमा जान्नुहोस्
अंग्रेजीमा सिफारिश गरिएको जापानी सम्बन्धित साइटहरू
यस पृष्ठमा, म जापानमा सम्बन्धित विभिन्न वेबसाइटहरू परिचय दिनेछु। म समय समयमा यो जानकारी अपडेट गर्ने छु। यो तपाइँको जानकारी एकत्रीत गर्न को लागी एक उपयोगी संसाधन हुन सक्छ। होटल, यातायात, रेस्टुरेन्ट, र स्थानीय सम्बन्धित वेबसाइटहरू कोटिहरू द्वारा विस्तारमा संक्षेप गरिएको छ। त्यहाँ लिंकहरू छन् ...